रमेश पराजुली बुटवल, २५ असार । नेपालको सन्दर्भमा असार मौसमको हिसाबले अत्यन्तै प्रतिकुल महिना हो । कृषि प्रधान देश नेपालका धेरै मानिसहरू कृषि कर्ममै व्यस्त हुने गर्दछन् । चर्को गर्मी तथा मनसुनको सिजन रहने भएकोले...
बुटवल, २१ असार। रानीमहल पश्चिम नेपालकै एक चर्चित स्मारक हो ।बि.स.१९४८ खड्क समशेर पाल्पाको प्रमुख प्रशाशक भइ यहाँ आए पछि उनैले आफ्नी प्यारी रानी तेज कुमारिको सम्झनामा कालीगण्डकी नदिको किनारमा यो दरबार बनाउन लगाएका...
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली ज्यू नमस्कार! सर्वप्रथम हजुरको सुस्वास्थ्य र देश र जनताको हितमा सफल कार्यकालको शुभकामना छ।नेता वा राजा त्यही सफल हुन्छ जसले रहेको इतिहास मर्न दिंदैन र नयाँ इतिहास पनि निर्माण गर्दछ। अाफूलाई...
रमेश पराजुली बुटवल, १५ असार । आज असार १५ ‘मानो रोपेर मुरी उब्जाउने’ महिना मानिने असारको मध्य दिन । यस दिनको बिशेष र छुट्टै महत्व रहेको छ नेपाल सरकारले पनि आजको दिनलाई धान दिवस संगै...
“जिन्दगी जिउन भन्दा मर्न गार्हो रै, छ दिदी”
के गर्नु कर्म फुटेको भएपछि भाग्यले पनि ठग्दो रहेछ । जब आफ्नो श्रीमानले हेला गर्छ, तब सबैको हेलाको पात्र भइदो रहेछ । सबै बलेको आगो मात्र ताप्ने रैछन् । यसरी आप्mनो पीडा पोख्छिन्, देवदह...
रमेश पराजुली बुटवल, १७ जेठ । संसारका सबै मानिसहरूले खुशी खोजीरहेका हुन्छन् । खुशी रहनु सबै मानिसको जन्मजात स्वभाव हुन्छ यसमा कसैको दुई मत छैन । तर पनि हामी चाहँदा चाहँदै सधैँ खुशी भएर बाँच्न...
भक्तपुर, १५ जेष्ठ विश्वमा सबैभन्दा बढी क्ष्लतभचलभत को प्रयोग हुने देश चिनमा सन २००६ मा मनो चिकित्सक टाओ रन (त्बय च्बल० ले एउटा यस्तो संस्था स्थापना गर्नुभयो जसको उद्देश्य क्ष्लतभचलभत को अधिकतम प्रयोगका कारण उत्पन्न...
छोरा, शुभ आशीर्वाद ! बुहारी र नातिनातिनामा धेरै धेरै सम्झना ! पशुपतिनाथको कृपाले आरामै छौं। प्यारी बुहारी र साना दुई नातिनातिनालाई कस्तो छ ? नदेखेको धेरै भयो तर याद ताजै छ। असीम सम्झनासँगै आशीर्वाद र...